ရခိုင် – ရိုဟင်ဂျာ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်း ပြုစုသူ ဆရာဦးအောင်ဝင်း (စစ်တွေ) | Danya Wadi
»မှတ်စု»ရခိုင် – ရိုဟင်ဂျာ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်း ပြုစုသူ ဆရာဦးအောင်ဝင်း (စစ်တွေ)
Posted by danyawadi on November 8, 2012 in မှတ်စု, သတင်းများ, အထူးကဏ္ဍ, ဆောင်းပါးများ
by Mg Thit Sar on Wednesday, November 7, 2012
တည် ငြိ မ် မူ ကိုပျက် ပြားစေရသည့် အကြောင်းအရင်း။
၁။ ၂၀၁၀ ခုနှ စ်ဒီ မိုကရေစီရွေးကောက် ပွဲပြီးနောက် တိုင်းရင်းသားပါတီ များထဲတွင် လွတ်တော်အမတ် အများစုအနိုင်ရရှိခဲ့ သော (RNDP)ပါတီသည်ရွေးကောက် ပွဲပြီးနောက်၊ပေါက် တောမြို့ နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေရှိပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ်နေရာကို၎င်းတို့ (RNDP) ကိုယ် စားလှ ယ်လောင်းကသာ အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ ထိုကြောင့် ပြည်ခိုင် ဖြိုးပါတီကိုပြည် ထောင် စုရွေးကောက် ပွဲဆိုင်ရာ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးတွင် တရားစွဲဆိုခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင် စုရွေးကောက် ပွဲဆိုင်ရာ အခြေခံခုံရုံးမှ တိုင် ကြားချက် ကိုအမှု ဖွင့်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက် ပြည်ခိုင် ဖြိုးပါတီကိုယ် စားလှယ်အား အနိုင်ပေးခဲ့ ကြောင်းပြည်ခိုင် ဖြိုးပါတီကိုယ် စားလှယ်၏ တရားမျှတစွာ အနိုင် ရရှိမှု ကိုအသိ အမှတ် မပြုနိုင်သော (RNDP) ပါတီသည်ပြည် ထောင် စုရွေးကောက် ပွဲဆိုင်ရာ အခြေခံခုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ် ချက်ကိုတရားဥပဒေအား လေးစား လိုက်နာ ကျင် ကြံတတ်သော စရိုက်အမြင် ဖြင့်လက် မခံဘဲ ထိုခုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက် သည် တရားမျှတမှု မရှိကြောင်း မမှန် မကန် စွ ပ် စွဲပြီးပါတီဗဟိုအလု ပ်အမှုဆောင် များအားလုံးစုပေါင်းလက် မှ တ်ရေးထိုး ကာ ဆန့် ကျင်ကန့် ကွ က်သော ကြေညာချက်ကိုထုတ် ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပြည် ထောင် စုရွေးကောက် ပွဲဆိုင်ရာ အခြေခံခုံရုံး၏ အဆုံးအဖြတ်သည် မှန် ကန် မှု မရှိ၍ လက် မခံနိုင်ကြောင်း ကန့်  ကွက်ခဲ့ သည့်ကြေညာချက်သည်ရွေးကောက် ပွဲဆိုင်ရာအခြေခံခုံရုံး၏ အဆုံးအဖြတ်သည်သာ နောက်ဆုံး အတည် ဖြစ်ရမည်ဟုပြဌာန်းပါရှိသော ရွေးကောက် ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေကိုအတိအလင်း ဆန့်  ကျင်နေသောကြောင့်(RNDP) ပါတီသည် ထိုကြေညာချက် ထုတ် ပြန် သည့်နေ့ မှ စ၍ မိ မိ တို့ စိတ်ထင်တိုင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုခြေနင်းလိုသည့်စိတ် ဓါတ် များ လွ မ်းမိုးနေသောပါတီ တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သိသာမြင် လာနိုင်သည့်အပြင်(RNDP) ပါတီသည် တခြားသောပါတီအဖွဲ့အစည်းများထက်နိုင်ငံ တော် တရားရေးဆိုင်ရာ အမြင့် ဆုံးတစ်ခု တည်းဖြစ်သော ခုံရုံးအား ဆန့် ကျင် စိန်ခေါ်ခဲ့ သော လု ပ်ရပ်သည် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကိုမထီ မဲြ့ မင်ပြုလု ပ်ရန်ဝန် မ လေးတတ်သော နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ် မိပါသည်။
၂။ ပထမဆုံးအကြိ မ်ကျင်းပခဲ့ သော ပြည်သူ့လွတ်တော်၏အတွေ့အကြုံကိုမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထုအား ရှင်းလင်းတင် ပြလိုသည်ဟုပြည်ထောင် စုရွေးကောက် ပွဲကော် မရှင် ထံ အကြောင်းပြ ခွင့်ပြု ချက်ရယူခဲ့ သော (RNDP) ပါတီသည် အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲကိုကျောက် ဖြူမြို့၌ ကျင်းပပြီးရှင်းလင်းတင် ပြရာတွင်အဓိ ကလွှတ်တော် အတွေ့ အကြုံကိုပြည့်စုံစွာရှင်းလင်းတင် ပြခြင်းမပြုခဲ့ ဘဲ လူ ထုတောင်းဆိုတိုက် ပွဲအသွင်ဆောင်သော My gas, My gas,My gas,My gas, My futureMy futureMy futureMy future ဟူသော တောင်းဆိုချက်ကိုနိုင်ငံရေး သမား အချင်းချင်းစည်းဝါးရိုက် ပြီးရခိုင် တိုင်းရင်းသားလူထုထဲတွင်ရိုက်သွင်းပေးခဲ့ သည်။ ၎င်းပြင် ရခိုင် ပြည်နယ် တွင် (၂၄)နာရီမီးမရရှိသည့် အတွက်ကြောင့်သဘာဝသယံ ဇာတမှရရှိနေ သည့်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းမြောက် များစွာကိုရခိုင် ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အသုံးပြုရမည်ဟုထိုအစည်းဝေးတွင်တောင်းဆိုခဲ့ ရာ ထိုတောင်းဆိုချက်သည် နိုင်ငံရေးပါတီ အားလုံးမှပါတီ စတင် တည်ထောင် စဉ် က နိုင်ငံတော် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံ ကိုလေးစားလိုက်နာပါမည် ဟု သဘောတူ လက် မှတ်ရေးထိုးထားပါလျက်နှင့်မသိကျိုးနွံပြုပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကိုဆန့် ကျင်နေသောပါတီဖြစ်နေပြန်သည်။ အကြောင်းမှု ကား ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်နိုင်ငံတော်၏ သဘာဝ သယံဇာတအားလုံးကိုပြည်ထောင် စုအစိုးရ ကပင်စီ မံခန့် ခွဲဆောင်ရွက်ရမည် ဟုဖော် ပြပါရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်(RNDP) ပါတီ၏ ကျောက် ဖြူမြို့၌ ဟောကြားတောင်းဆိုချက် များသည် ထပ် မံ၍ ဒု တိ ယအကြိ မ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဆန့် ကျင်ရာရောက်နေကြောင်းသိသာမြင်သာရှိနေပါသည်။ ထို့အပြင်ပြည်ထောင် စုသမ္မတ မြန် မာနိုင်ငံတော်သည် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ ခိုင် မြဲ ပြီးမြန် မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ် ပိုင်အခွင့် အရေးများကိုကာကွယ်ပေးနေသည်ကိုသိရှိပါလျက်နှင့်(RNDP) ပါတီသည် ရခိုင်သားတို့အား နိုင်ငံ တော် မှအပြည့်အ၀ အကာအကွယ်လုံခြုံမှုမပေးဘဲ ရခိုင်ဒေသမှ သဘာဝသယံဇာတများကိုသာ အလျှံအပါယ် အငမ်းမရ ထုတ်ယူရောင်းချရန်ဆန္ဒရှိနေကြောင်းမရိုးဖြောင့် သော သဘောဖြင့်စွ ပ် စွဲခဲ့ပြန်သည်။
၃။ ဒီ မိုကရေစီကျင့်စဉ် တရပ်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ သည့် ၊ ပထမအကြိ မ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး
← နိုင်ငံအဝှမ်း မွတ်စလင် အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်ရေး စစ်အစိုးရ စီမံကိန်းရေးဆွဲနေသလား?
Rohingyas Demonstrated in Putrajaya Today | M.S. Anwar →